ပို့စ်တင်ချိန် - 3/05/2014 11:38:00 AM
Marissa Mayer လို့အမည်ရတဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပြီး အသက် ၃၈ နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာပဲ Yahoo! ရဲ့  စီအီးအိုအဖြစ် အခန့်အပ် ခံရပါတယ်။
Yahoo! မတိုင်မီက ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကစလို့ Google မှာ စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ Google ရဲ့  အယောက် ၂၀ မြောက်ဝမ်းထမ်း၊ ပထမဦးဆုံး အမျိးသမီးအင်ဂျင်နီယာ ဝန်ထမ်းအဖြစ်လည်း အသိအမှတ်ပြု ခံခဲ့ရပါတယ။် Google မှာတုန်းကလည်း လုပ်သက်ရှည်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး ခေါင်းဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်များ စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့သြဇာလွမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး အမျိုးသမီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် စာရင်းမှာ အဆင့် ၁၄ အနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မီလျံနာ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး Yahoo! အပြင် အခြားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပရဟိတ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများစွာမှာလည်း တာဝန်ယူ ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က Zachary Bogue အမည်ရ ရှေ့ နေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကလေးမွေးလို့ မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်လာပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်ပေမယ့် အိမ်မှုကိစ္စထပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ပိုမိုအားစိုက်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတာဝန်လွဲပြောင်းယူတဲ့ Yahoo! ဟာ ၂၀၁၃ မှာ အလားအလာကောင်း များ မြင်တွေ့ခဲ့ရ ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် Google ကို ကျော်လွန်လို့ အမေရိကန်မှာ လူသုံး အများဆုံး Search Engine တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အတွက်လည်း သြဇာ အရှိဆုံး အမျိုးသမီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။